Tabatabam-blaogy avy any Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2018 7:49 GMT
Noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika, manontany tena ny Metroblogging avy any Pakistana hoe rahoviana no hahazo posiposy toy itony ao amin'ny fireneny. Ary milaza ny Unheard Voices avy any Bangladesh fa laharana faha-4 tamin'ny demokrasia tao anatin'ny fanadihadiana vao haingana no nisy an'ilay firenena. Raha toa ka manontany tena matetika ianao hoe toy ny ahoana ny sehatry ny lamaody any Nepal tato ho ato, vakio eto ny mikasika izany.
Sahirana nanoratra mikasika ny toekarena, politika ary ny fomba fialamboliny tiany indrindra: sarimihetsika, ireo blaogera tany India. Tsena vaovao ao India ny Rural India. Namintina tsara ny zava-mitranga rehefa nanapa-kevitra ireo orinasa ny hanisaka ireo asa IT avy tamin'ny toerana an-drenivohitra hankany amin'ny toerana ambanivohitra i Govindaraj Ethiraj.
Ary ity misy zavatra mikasika ny hoe afaka mitranga amin'ny vidiny mirary ve ny fivoarana. Mijery ny fomba ikendren'ireo orinasam-piaramanidina ireo tanàna ambaratonga faharoa ao India ny Prof Sadagopan.
Milaza i Chutney Spears fa tsy afaka mandeha mahitsy ny Antoko Havia ao India. Somary niteraka vaovao am-blaogy maromaro ny safidin'i India tamin'ny Oscar 2006. Manana izao i Lazygeek ho lazaina mikasika ny hevitr'i Paheli sy ny GreatBong mikasika ny fomba tokony nisafidianan'ny mpitsara ilay sarimihetsika .